Abaal Marinta ay Bixisay Al-Qalam waxay ka dhigantahay daruur hillaacday!
By ibrahim Aden shire August 23, 2017
Hay'adda wax barashada iyo tabarbarada ee Al-Qalam oo fadhigeedu yahay dagmada Garbahaareey ayaa shahaado sharaf bixisay 20/08/2017. Abaal marintaan lama siin ardo ku baastay natiijo sare, lama siin kuwo guulaystay tartarn Qur'aan lamana siin koox guul kasoo hoysay tartan cayaareed ay magaaladooda ku matalayeen.
Balse waxaa la siiyay mudane dictoor Cabdirashiid Cabudullahi Cilmi oo ah bare sare oo wax ka dhigo jaamacada Bariga Africa ee dalka Suudaan. Abaal marintaan ayuu diktoorku ku mutaystay wax qabadkiisi iyo doorka uu ku leeyahay horumarinta wax barashada dalka gaar ahaana midda gobalka Gedo.
Maxaa Muhiim ka dhigay Abaal marintaan?
Waxaan caan ku noqonay inaan hiif iyo haaraan isugu darno kuwa bulshada u adeego oo waxay heli kareen iyo waxay haaban kareenba ku biiriyay horumarinta bulshada badalkii la bogaadin lahaa wax tarkooda. arintaan maahan mid ugub ah ee waa dhaqan waligiis soomaalida ka dhex jiray. Allaha u raxmadee Farax Xusseen Sharmaake waa kii lahaa
"Tolkay baan nin-doorkiis aqoon jeer god loo diro e
Boqorkii u daahira col bay ugu dedaaleene
Dayaxoodu goortuu dhacaay ‘dugey!’ yiraahdaane!
Sidoo kale, Cali sugule waa kii yiri "Kol haddaanad geerida horteed geesiga aqoonnin
Goblan weeye Soomaaliyeey garashadaadii".
Tusaale, haddi shaqi is xilqaamo dadaal dheerna u galo inuu soo helo minxo wax barasho oo bilaash ah. waji gabax, baryo badan iyo kallahad badan ka dib uu ku guulaysto inuu soo helo 10 boos, la eegi mahayo dadaalki uu sameeyay ee aysan cidna lacag ku siine waxaa la bilaabi in la yiraahdo wuxuu ku qaraabtaa magaceena, wuxuu xaday boosaski loogu talagalay caruurta, wuxuu ka taajiray iibsashada fiisooyinka uu kasoo qaado jaamacadaha iyo wax la mid ah.
Tani waxay keentay in dad badan oo bulshada qiimo u lahaa wax badanna qaban lahaa ay isaga cararaan si ay wajigooda u ilaashadaan. waxay keentay in kuwii ka shaqayn jiray soo saaridda fiisayaasha ay faraha ka qaadaan. waxay niyad jabisay dadkii ku howlanaa u shaqaynta wax barashada iyo badbaadinta mustaqbalka ubadkeena. Sidaa darteed abaal marinta ay bixisay Al-Qalam ayaa noqonayso middii ugu horaysay ee nooceeda ah inta aan anigu ka war qabo oo la siisay ruux lagu sharfay shaqada uu bulshada u hayo. waxay badali doontaa ilahay idinkii fakarkii foosha xumaa ee aan ka haysanay kuwa noo adeego waxayna dhiiri galin doontaa kuwa hadda noo shaqeeyo kuwo cusubna way soo jiidi doontaa.
Labo, wuxuu yiri suubanahu SCW "qofkii wanaag idiin sameeyo u beegtooma. haddii iidan u beegtoomi karin u duceeya". mar kale wuxuu SCW "Eebe kuma shukriyo kuwaan dadka ku shugrin". Axaadiistaan waxay na barayaan inaan aqoonsano dadka noo axsaan sameeyo aana ugu abaal gudno wanaag ka badan ama la mid ah kay inoo galeen. hadii duruuftu inoo diido inaan u samayno waxay noo sameeyeen oo kale inaan u ducayno Eebe weyne aan u waydiino janno iyo danbi dhaaf. sidaa darteed abaal marintan ay bixisay Al-Qalam waxay inaga ridaysaa waajibki na saarnaa.
Sadex, waxaan rajaynayaa inay furi doonto waddo wanaagsan oo dad badan oo kale ooga daydaan. Al-Qalam iyo maamulkeeda horay waxay u billaabeen howlo badan oo aan gobal hortood jirin wax yar ka dibna waxaa ku dayday dad badan oo raacay jidkoodi sidaa owgeed waxaan filaynaa in sidii hore oo kale loogu dayan doono lana arki doono dhawaan abaal marino kale oo lagu maamuusay dad bulshada wax u qabtay.
Inkastoo ay Al-Qalam horay shahaado sharaf u guddoonsiiyaya hay'adaga kala ah NCA iyo SEDO sanadi 2013 hadana tani way ka duwantahay waayo waa mid shaqsi kaligiis ah lagu maamuusay. Kala duwanaanshaha waxaa si fiican u muujinayo in hayaduhu yihiin kuwa taageero maaliayadeed bixiyio taasoo dadku ay oran karaan waxaa abaal marinta loo siiyay si lacag looga helo. Balse midda la siiyay Dr Cabdirashiid maahan mid uu kasbaday lacag uu bixiyay iyo mid usoo qaraabay toona ee mid loogu aqoonsaday dadaalkiisa uu u fidiyay caruuurta soomaliyeed si kala sooc la'aan ah, iyo dadaal ki uu galiyay inay wada shaqayn dhexmarto qaar ka mid ah jaamacadaha Soomaaliya iyo kuwa Sudaan.
Waxaan rajaynayaa inaan arki doonno iyadoo la aqoonsaday dadki gobalkaan ka hirgaliyay wax barashada taabbo qaaday ee maanta ka jirto iyadoo aysan jirin dowlad iyo maamul ku garab istaagay. dadki waqtigoodi u huray danahoodina ka hormariyay hir galinta goobo wax barasho oo badbaadiyo ubadkeena iyo mustaqbalka dalkeena.
Dadkaas oo ay oogu horaayeen Allaha xafidee Sheekh Xuseen Ibraahim Axmed-Nuur (sheekh xuseen dheere), Aadn Cabdi Qarash, Qaasim Macalin Cali iyo Maxamed Ibraahim Xasan iyo kuwo kale oo aan halkaan hadda kusoo koobi karin. sidoo kale waxaa xusid mudan oo aan laga abaal dhici karin hay'adaha samafalka ee wax barashada gacanta ku lahaa sida NCA, Trocare iyo HIRDA.
waxaan ku bogaadinayaa qof walba oo aqriya qormadaan inuu ku daydo dadkaas aan kor ku xusay haddii uusan qaban karin shaqada ay hayyaana u ku taageero ugu yaraana ugu duceeyo in Eebe ka abaal mariyo dadaalkooda.